Manala « vernis permanent » ao an-trano …
Mateza kokoa eo an-tanana sady manjelatra hatrany ny « vernis permanent » na « semi-permanent » raha ampitahaina amin’ireo « vernis » tsotra sy mahazatra ny maro hatramin’izay
. Hatramin’izay dia any amin’ilay « salon » nametahana azy ihany no hanesorana azy ireny afaka 3 herinandro eo. Manomboka izao kosa anefa dia efa azo atao ny manala izany mora foana ao an-trano raha manana ireto fitaovana ireto ianao …
Akora ilainao hahafahana manao izany
- Dissolvant misy “acetone”
- Vontosana “dissolvant” ilay vovon-dandihazo. Fonosana an’izany ny hoho avy eo, ary saronana amin’ilay « papier aluminium” atao mihenjana tsara. Atao toy izay avokoa ny hoho tsirairay ary dia fonosina amin’ilay “gant” na fonon-tanana ny tanana iray manontolo avy eo.
- Avela hihiboka ao mandritra ny 15 na 20 minitra eo.
- Ao aorian’izay dia esorina amin’izay ary sintonina mora foana tsirairay avy ireo vovon-dandihazo amin’ny hoho.
- Sasao madio ny tananao avy eo, ary hamandino ny tanana. Hosory akora miaro sy mamelombelona azy kosa ny hohonao.